बंगलादेश विरुद्धको टेस्ट क्रिकेटका लागि अफगानी टिम घोषणा, को–कोले पाए मौका? - Everest Dainik - News from Nepal
बंगलादेश विरुद्धको टेस्ट क्रिकेटका लागि अफगानी टिम घोषणा, को–कोले पाए मौका?
काठमाडौं । बंगलादेश विरुद्धको एक टेस्ट क्रिकेट म्याचका लागि अफगानिस्तानले टिम घोषणा गरेको छ । अफगानिस्तानले टेस्ट क्रिकेटका लागि राशिद खानको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय घोषणा गरेको हो । अफगानिस्तान र बंगलादेशबीचको टेस्ट खेल ५ सेप्टेम्बरदेखि सुरु हुनेछ ।
यस्तो छ बंगलादेशविरुद्ध खेल्ने अगाफगानिस्तानको टिम
यस्तै, अफगानिस्तानले त्रिकोणात्मक टि–२० क्रिकेट सिरिजका लागि पनि टिम घोषणा गरेको छ । त्रिकोणात्मक सिरिजमा अफगानिस्तानसँगै बंगालदेश र जिम्बाब्बे भिड्ने छन् ।
ट्याग्स: अफगानी टिम, टेस्ट क्रिकेट